မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ်..
မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ်..
Posted by intro on Jan 28, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., News | 23 comments
တစ်ရက်က intro တစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဂိမ်းဆိုင်ကထွက်ပြီး နံနက်စာစားဖို့ ထမင်းဆိုင်လေးကို ထွက်လာခဲ့တယ်… လမ်းထိပ်မှာဗျာ… အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် သူ့ကလေးကို အော်ဟစ်ပြီး ဆူပူနေတာ ကို ကြားလိုက်ရတယ်…. “ဟဲ့ စာကျက်ဆို ရင်မကျက်ဘူး၊ တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း နေပူထဲမှာ စောက်ကမြင်းကြော ထနေတာပဲ၊ ပြောလိုက်ရင်လဲ စောက်ဆင်ခြေချည်းပဲ၊ စာကျက်ဖို့ကျတော့ စောက်ပျင်းက ထူတယ်၊ နင့်အဖေ ပြန်လာမှ ငါ ပြန်တိုင်ဦးမယ်၊ လာ တက်တော့”၊ သူ့သားငယ် ကို အိမ်ပေါ်တက်ဖို့ ပြန်ခေါ်နေတာပါ…
ဒါကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကြားတော့ “ဒီအန်တီကြီးကွာ… စောက်ရမ်း မိုက်ရိုင်းတယ်၊ ကလေးကို ဆုံးမတာ ကောင်းကောင်းပြောတာ မဟုတ်ဘူး”
“အမယ်၊ မင်းကျတော့ မရိုင်းတာ ကျနေတာပဲ”
မဟုတ်ဘူးကွ မင်းကိုပြောတာမို့လို့ ငါမရိုင်းဘူး၊ အခြားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ရိုင်းမှာပေါ့၊ စောက် ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိသေးတယ်ကွ
အမ်၊ တစ်မျိုးပါလား၊ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး
ဒီလိုလေကွာ၊ မင်းလဲ လူငယ်တစ်ယောက်ပဲ၊ မင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဘူးတဲ့စကားတွေထဲမှာ စောက်ဆိုတာ ခဏခဏ ကြားဖူးတယ် ဟုတ်? စောက်ပျင်းပါကွာ၊ စောက်စကားများတယ်၊ စောက်ရမ်းနားငြီးတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့၊ အဲဒီမှာ သုံးတဲ့ စောက် က ငါတို့လူငယ်တွေ ကြားထဲမှာ သိတ်ရိုင်းတဲ့စကားမဟုတ်တော့ဘူး၊ အဲလိုပြောလို့ မင်းကို စိတ်ဆိုးတဲ့လူလဲ သိတ်မရှိဘူး၊ (ငါတို့လူငယ်ချင်းချင်းနော်) ကောင်မလေးတစ်ယောက်က လှတယ်ဆိုရင် ဟာ… စောက်ရမ်း မိုက်တယ် လို့ မင်းတို့ ပြောဘူးမှာပဲ… အဲဒီမှာ သုံးတဲ့ စောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အပြုသဘောဆောင်တယ်ကွာ… အရမ်းမိုက်တယ်(အရမ်းလှတယ်ပေါ့ကွာ)၊ အဲလို မပြောချင်လို့ စောက်ရမ်းလှတယ်လို့ ပြောတာ၊ အပြုသဘောဆောင်တယ်ကွာ very လို့ ပြောမယ်ဆို ပြောလို့ရတယ်၊ အဲသည့်နေရာမှာ စောက်ကို သုံးရင် မရိုင်းဘူး၊ ဥပမာကွာ – အာဇာနည်သီချင်းကို မင်းက ကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့၊ အဲဒါ မင်းက ဒီအဆိုတော် စောက်ရမ်း အသံကောင်းတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သူ့ကို ပိုပြီးတော့ အားပေးရာ ရောက်တဲ့အတွက် အဲသည့်အဆိုတော် ကြားရင်လဲ မင်းကို စိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်း စောက်ရမ်းလွန်တယ်နော်၊ မင်းသောက်တာ စောက်ရမ်းများနေပြီ ဆိုတဲ့ထဲမှာ စောက်ဆိုတဲ့ စကားကလဲ မင်းကို (အရမ်းလွန်တယ်၊ အရမ်းများနေပြီ) လို့ပြောချင်တာနဲ့ မခြားတဲ့အတွက် ငါတို့အမြင်မှာ ရိုင်းတယ် လို့မခေါ်ဘူးကွ…
အဲသည်တော့ ကွာ စောက် ဆိုတဲ့ စကားက very လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်ကွ…
အင်းလေ၊ ဥပမာ မင်းက ဒီကောင့်ကို စောက်ရမ်း လန်းတယ်ကွာ လို့ဆိုရင် ဒီကောင် စိတ်ဆိုးမလား၊
အေး၊ အဲလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ စောက်ရမ်း ညံ့တယ်ကွာ ဆိုရင် ရော
အေး အဲလိုပဲလေ၊ ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ စောက် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အတူတူပဲလေ… အရမ်းလန်းတယ်၊ အရမ်း ညံ့တယ် လို့ပြောချင်တာ မဟုတ်လား၊ တကယ် စိတ်ဆိုးတာ က စောက်ဆိုတာကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ညံ့ဆိုတာ ကြောင့် ဖြစ်တယ်…
ဟုတ်ပါပြီ ငါမေးမယ်၊ ဒါဆိုရင် စောက်လုပ်မရှိ၊ စောက်ကိုင်မရှိ တို့ စောက်စည်းကမ်းမရှိတို့ ဆိုတာ ကျတော့ရော…
အင်းလေ၊ ဒါလည်း လေးနက်တဲ့ သဘောဆောင်တာဘဲလေ…
မင်း စည်းကမ်းမရှိဘူးလို့ ပြောတာနဲ့ စောက်စည်းကမ်းမရှိဘူး လို့ ပြောရင် ဘယ်ဟာကို ပို မကြိုက်ကြသလဲ၊ မင်း အလုပ်မလုပ်ဘူးလားနဲ့ မင်းစောက်လုပ်မလုပ်ဘူးလား ဆိုရင်ရော၊
ဒါမှ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဟဲ၊ နင့်ရေမွှေးနံ့က မွှေးတယ် နဲ့ နင့်ရေမွှေးနံ့က စောက်ရမ်းမွှေးတယ် ဆိုတာနဲ့ကျရင်ရော
ဒါပဲလေ၊ ငါဆိုလိုတာက ဒီစောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အရင် ဆယ်စုနှစ်က လူတွေလက်ထဲမှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံး ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေနိုင်တယ်၊ ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ မင်းတို့ငါတို့လို လူငယ်စုတွေ ကြားထဲမှာ အဲလို သုံးရင် ရိုင်းတယ်လို့ သိတ်မထင်ကြတော့ဘူးကွာ၊ လူကြီးတွေတော့ မပါဘူးနော်။ အဲသည်တော့ နောက် ဆယ်စုနှစ် ငါးခုလောက်ဆိုရင် ဒီ စောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ပိုပြီးတော့ ရိုင်းတယ်လို့ ထင်တော့ မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငါ ထင်တယ်ကွ… အဓိက ပြောချင်တာက ငါတို့မိဘတွေက ဒီအချိန်မှာ မေမေ က စောက်ရမ်းလှတယ်လို့ ပြောရင် အခန့်မသင့်ရင် အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် နောင် ဆယ်စုနှစ် ငါးခုလောက် လောက်မှာ ငါတို့ သားသမီးတွေ၊ မြေးတွေက ဖေဖေက စောက်ရမ်း လန်းတယ် လို့ ပြောလာရင် ငါတို့ စိတ်ဆိုးမိမှာလား?
(အရေးအသား ရိုင်းပျသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ… စကားပြောနေရင်း ခေါင်းထဲက တွေးမိတဲ့အရာလေးကို ထုတ်ရေးထားတာပါ၊ အားလုံးရဲ့အမြင်ကိုလဲ သိချင်ပါတယ်)
စောက် ပိုစ့်လေး ဖတ်ရတာ စောက် ဂါထာ ရွတ် နေသလိုဘဲ စောက်ခြင်းထပ်နေတယ်။
ကို intro ရေးမှပဲ စဉ်းစားသွားမိတယ်…….တွေးစရာလေးပေးလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်…… နောက်နှစ်ပေါင်း ဆယ်စုနှစ် ငါးခုလောက်စောင့်စရာမလိုပါဘူးဗျာ……အခုတောင် ခေါ်နေကြတာပဲ…
ဆဲစာမပါလည်း စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လှလှကြီးစော်ကားလို့ ရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယဉ်ကျေးတာကောင်းပါတယ်။ မျက်နှာမူယာကအစ ယဉ်ကျေးဖို့လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြောလွယ်ဆိုလွယ်ဖြစ်တာ မကောင်းဘူး။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပကတိအလှဟာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုပါ။ ဒီအလှကို ဘယ်မိတ်ကပ်ဆရာမှ မဖန်တီးနိုင်ဘူး။ ဘယ်လိုအ၀တ်အစား၊ ဘယ်လိုဂုဏ်ရှိန်ကမှ မဖန်တီးနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာယောက်ျားတွေ အစဉ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာ ဒီသိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။
“စောက်” ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ပင်ကို ယုတ်ရင်းရိုင်းစိုင်းမှု ပါတဲ့ ကြမ်းတမ်းပြီးသား စကားလုံးပါ။
တစ်ဘက်သားကို နစ်နစ်နာနာ ဖြစ်စေလိုတဲ့အခါ အထူးပြု သုံးကြပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရောယှက်လာတဲ့အတွက် မထူးဆန်းသလို ဖြစ်သွားတာတစ်ခုက လွဲရင် ပင်ကို ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းမှုကတော့ ပျောက်မသွားပါဘူး။
ဥပမာ ပြောရရင် အနောက်တိုင်း မှာ ထမင်းစားရေသောက် သုံးနေကြတဲ့ ” f**k” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ သဘော အတူတူပါပဲ။
စကားလုံး ရဲ့ ပင်ကို ရိုင်းစိုင်းမှု က ပျောက်ကွယ်မသွားပါ။
လူတွေကသာ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းမှု နဲ့ အသားကျသွားခြင်း၊ မွေ့လျော် ယဉ်ပါးသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ဂါရဝေါစ၊ နိဝါတောစ တရား တွေ ခေါင်းပါး ပျက်သုဉ်းတဲ့ ယနေ့ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လာနေတာပေါ့။
Reading Counts: 670, November 10, 2010 in Short Story by zinmyotun
အဲဒီအပေါ်ကပို့ စ်မှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ကောမန့်ပါ..။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး..။
လှသည်။ ကောင်းသည်။ ညံ့ သည် စတဲ့ စကားလုံးနောက်မှာ စောက်လို့ သုံးခြင်းသည် အနက်(စောက်) လို့ ယူနိုင်မယ့် (သို့တည်းမဟုတ် ယူဆနိုင်စရာ) အနက်ထွက် စကားလုံး ဆိုရင်…ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဗျာ။
သိပ်တော့ လစ်ဘရယ်မကျနဲ့ဗျို့၊ မိဘဆိုတာ အနန္တောအနန္တငါးပါးထဲ ပါသဗျ။ သိမိသလောက် ကျုပ်တို့မိဘတွေခေတ်တုံးက ကောင်မလေးကို စော်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောတာ ရိုင်းသဗျ။ အသံတူစာလုံး ဆော်တယ်လို့ ယူတယ်နဲ့တူပါတယ်။ တချို့တွေက အခုလိုစောက်စာလုံမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးတာကို တလွဲဆံပင်ကောင်း ဂုဏ်ယူကြတယ်။ အထူးသဖြင့် လူရိုးလူအ တောသားများရှေ့မှာပေါ့။ ကြာပါပြီတနေ့မှာ ကျနော်ကို အဖြူသူငယ်ချင်းမတဦးက ဟဲလိုးဝင်းပါတီဖိတ်လို့ ဘီယာကတ်လေးနဲ့ချစ်ပ်အထုတ်လေးဆွဲသွားတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အလာပသာလပပြောပြီး သောက်ကြစားကြတာပေါ့လေ။ သူတို့က ကျနော့်ကိုရှေ့ထားပြီး အချင်းချင်း စကားနဲ့ F ဗုံးကြဲကြပါတယ်။ တောကတက်လာတဲ့ ကြောင်သားသားလေးကို မြို့ကြီးသူ၊သားတွေက ပုံစံပေးတယ်လို့ ခံစားမိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို တောသားလေးများ အလည်လာရင် အပြောအဆို အနေအထိုင် တမျိုးမျိုးနဲ့ ပညာပေးခံရသလိုပေါ့။
ကျုပ်လဲလူငယ်တစ်ယောက်ပဲ … ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို.လူငယ်တွေပဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေတဲ့ ……
ဒီလို …ေ-ာက်ထည့်ပီးပြောတဲ့ စကားတွေကြားရတာ … တော်တော်နားခါးတရ်ဗျ။
တရားသမားမဟုတ်ပေမဲ့လို. … ကျုပ်နဲ.လုံးဝအံမ၀င်ဂွင်မကျဘူး။
လူကြီးသူမတွေလဲ မကြိုက်တာ သေချာတရ်။
အဲဒီတော့ အခုခေတ်လူကြီးမိဘတွေရော …
အနာဂါတ်ကျုပ်တို.အလှည့်ရော …ေ-ာက်သုံးပီးအပြောမခံရအောင် ….
ကျုပ်တို.လူငယ်တွေကပဲ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ. ……
သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ တစ်ပိုင်တစ်နိင် ပြောပြရင်း ….
Individual to Group စနစ်နဲ. စတင်ထိမ်းသိမ်းကြပါစို.လားဗျာ။
အထက်တန်းတုန်းကတော့ လေး၊မြား၊ဆောက်၊ပုတ် ဆိုတဲ့ နေရာရောက်ရင် ကျောင်းသားတွေ အားလုံး ကျောင်းသူတွေ မျက်နှာကို ပြုံးဖြီးဖြီး ကြည့်ပြီး
အသံကိုမြှင့်ပြီး လေး၊မြား၊…. ဆောက်ပုတ်…. လို့သံပြိုင်အော်ကြတာပေါ့။
တစ်မျိုးပဲ ဒါဆို ရိုင်းတာလား နောက်ဆိုရင်ရော ဒီလိုပဲလား ဦးကြောင်ကြီး ပြောသလို အရင်က စော်ဆိုတာက ရိုင်းတဲ့စကားလုံး ဖြစ်ပေမယ့် အခုဆို လူကြီးတွေတောင် ထမင်းစားရေသောက် သုံးနေတဲ့ စကားလုံးဖြစ်လာတော့ ဒီ စောက်ကြီးကလဲ နောက်ဆို ထမင်းစား ရေသောက် စကားလုံးဖြစ်တော့မှာလား စိတ်ပိန်တယ် မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး
ဟုတ်တယ်တို့တွေကတော့ နားမယဉ်သေးဘူး စောက်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို ကိုယ့်ကိုပြောရင်လဲ မကြိုက်ဘူး၊ ကိုယ်ကလဲသူများကို မပြောဘူး
ဒီစကားကို နှစ်အဆက်ဆက်တည်တံ့ဖို့ထက် ပပျောက်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းပြုပြင်သင့်တယ်
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ ခုချိန်အထိ ဒီအသုံးအနှုံးဟာ ရိုင်းတယ် လို့ ခံစားမိပါတယ်… ကျွန်တော်ဟာ ဂိမ်းဆိုင်လိုမျိုး လူငယ်တွေချည်းရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ အချိန်တော်တော် ပေးပြီးနေခဲ့တာပါ… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခုချိန်အထိတော့ ဒီအသုံးအနှုံးကို မကြိုက်ပါဘူး… ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့တိုင်းလိုလို ကြားနေရတယ်… ပြီးတော့လဲ ဒီစကားကို ရိုင်းတယ်လို့ ယူဆပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးတတ်တဲ့ မိသားစုကိုလဲ ကြုံဖူးပါတယ်… ဒီလိုပဲ မိဘကအစ သားသမီးအဆုံး ဒီစကားကို တွင်တွင်ကြီး သုံးနေပေမယ့် သိတ်ထူးထူးခြားခြား သဘောမထားတဲ့ မိသားစုကိုလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်… ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်အဖေကို ကျွန်တော် ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်… သူလူပျိုပေါက်အရွယ်က မိန်းကလေးတွေကို စော် လို့ စခေါ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်… ဒါပေမယ့် အဲသည့်အသုံးအနှုန်းဟာ ရိုင်းတဲ့ အတွက် အခေါ်ခံရသူ မည်သူမျှ မကြိုက်ကြဘူးလို့ ပြောပါတယ်… အဲဒါက ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၃ခု ၄ခုလောက်ကပေါ့… ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ဒီစော်လေးက လှလိုက်တာကွာ ဆိုရင် အတော်များများ စိတ်မဆိုးကြတာကို သတိထားမိပါတယ်… သိတ်ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား မခံစားမိတာကို ပြောတာပါ…phantom ပြောချင်တာနဲ့ တူပါတယ်… (ဒီပိုစ့်ဟာ ရိုင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ယူဆပါတယ်) ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲ တိုးတက်တာတွေရှိကြပါတယ်… ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းတွေရော မကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းတွေပါရှိကြပါတယ်… ဥပမာ ဆိုရရင် – ကျွန်တော့်အဖေ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားအရ ကျွန်တော်တို့ အဘိုးခေတ်က ဆိုရင် ကျွန်တော့်အဖေ တို့က ပလေးဘိုင်းသန်းနိုင်တို့၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့လို အဆိုတော်တွေ ပွဲမသွားရဘူး၊ သူ့အခွေ မဖွင့်ရဘူးဆိုပြီးတားမြစ်တာ ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်… ဒါလိုပဲ ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာ bigbag သီချင်း ဖွင့်ရင် ကျွန်တော့်အဖေ မကြိုက်ပါဘူး၊ ပြောချင်တာက သူ့အချိန်နဲ့သူအကြိုက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်… ကျွန်တော့်အဘိုးခေတ်က မိန်းကလေးကို စော်လို့ပြောရင် လက်မခံကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ မိန်းကလေးကို စော်လို့ပြောရင် နည်းနည်းတော့ လက်ခံလာပြီ လို့ ခံစားမိပါတယ်… (ဒီပိုစ့်ဟာ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွေးမှာ ပေါ်လာတာလေးတစ်ခုကို ချပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်… တွေးစရာလေးပေါ့၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်အောင်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် မရည်ရွယ်ဘူး ဆိုတာပါ ထည့်သွင်းပြောကြားလိုပါတယ်)
နှိုင်းပြောရရင်.. မြန်မာလောက် … ဆဲတဲ့စကားစုံတဲ့တိုင်းပြည်မရှိလောက်ဘူးထင်မိပါတယ်.။
မြန်မာက.. ဆဲတာတွေ.. အယုတ်တမာပြောတာတွေ.. စိတ်မှန်းလေးနဲ့တင်ချရေးကြည့်.. မကုန်နိုင်ဘူး…
ရှေးခောတ်စာဆိုတွေရဲ့ ..ကဗျာ၊စာတွေထဲမှာလည်း .. ဆဲတာပါသလို… အောက်ပိုင်းကမတက်တာတွေ အပြည့်ပါ..။
စောက်ရဲ့အဓိပါယ်ကြည့်ရတာ.. နက်ရိုင်းမှုနဲ့.. အထူးပြုပုံရပါတယ်..။
စောက်ရမ်းလှတယ်..ဆိုတာမှာ .. အရမ်းကိုလှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ထက်.. ပိုပြီးတိုးလာမဲ့အဓိပါယ် မထင်မိပါဘူး..။မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ် ကတော့ ..နည်းနည်း ဒေါသသင့်မယ်ထင်ပါတယ်..။
မိခင်က ..အရမ်းလှနေတယ်ပြောရင်.. တမျီုးကြိးပဲလေ..။
ဒို့အမေ စောက်ရမ်းတော်တယ်ကွ ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့..။
မနော အမြင်အရကော မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရကော တော်တော်မိုင်းရိုင်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အသုံးအနှုန်းသုံးသုံး ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအတော်များများ သုံးလာတာကြတာ မောင်နှမသားချင်းတောင် ဘေးမှာ မနေသင့်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာ တော်တော်အဖြစ်များပါတယ်။ လူငယ်တွေ ပါးစပ်စည်းကမ်းမရှိ မိဘနှမ အစ်မတွေကိုမေ့ တိုင်းတာမှုယူနစ်တွေနဲ့ ဆဲဆိုနေကြတာဟာ တော်တော်ကို မိုးမွှန်ပါတယ်။ ရှေ့ခြံက အရှေ့မှာဆိုင်လေးထုတ်ပြီး ဂိမ်းဆိုင်ကိုး ငှားထားပါတယ်။ ဒီလို မိမဆုံးမ ဖမဆုံးဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို လူငယ်တွေ ဂရုမမြင်ပဲ ဆဲချင်တိုင်းဆဲ ပြောချင်တိုင်းပြောနေကြတာ မနောရဲ့မောင်တွေကိုတောင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ပေးမထွက်ရဲသလောက်ပါပဲ။ ထွက်တာနဲ့ အသိပဲလို့ ဟန့်ထားရတဲ့အခြေအနေပါ။ မနောတို့ မောင်နှမတွေက ငယ်ထဲက ဒိလိုအပြုအမူတွေ မရှိခဲ့သလို သူများပြုမူလာရင် နားထဲမှာ တော်တော်ကို နားကြားမကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေပါ။ ပြီးတော့ ငယ်တုန်းက သူများနဲ့ဆော့ပြီး သူများပြောတာ ပြန်ပြောမိလို့ကတော့ လာထား အပ်နဲ့ ပါးစပ်ကို ထိုးပြီးသာ အောင်းမေ့တော့ မိဘတွေက ဒီလိုလုပ်လာတော့ ခုထိ ဆဲတာ မပြောနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေ မသုံးဖူးဘူး ဖြစ်နေတော့ ဒီလို ခေတ်မီတိုးတက်ပြီး ဆဲတာ ဆိုတာကို အားပေးနေကြတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးသာ တိုးတက်လာခဲ့၇င်………………. မြန်မာပြည်ရဲ့ နူးညံ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ဆိုတာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့………… ခုပြောတဲ့ ခေတ်မီတဲ့စကားလုံးကို ချမရေးတာတော့ နားလည်ပေးပါနော်…..
စနေဒေါင့်မှာ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး စောက်တင်းပြောတာ တွေပါ မပါလာတာကံကောင်းပေါ့
ဘန်းစကားတွေ ဘန်းစကားတွေ နားထဲ ကိုးလိုကန့်လန့်နဲ့ …း)
စာမတတ်ခင် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ စုန်းပြူးတွေ စော်စော်ကားကားပြောတဲ့ စကားတွေလေ။ စွမ်းလည်းမစွမ်းဘဲ စင်ပေါ်တက်ချင်တဲ့ စိုက်ကိုသမား စားဖားတွေလိုပေါ့။ စိန်စိန့်သူငယ်ချင်း စိုးမြတ်သူဇာကိုစွဲပြီး စောင်းမပြောဘူးနော်။ စစ်အစိုးရနဲ့ စိမ်းစိမ်းနေတဲ့ စုသခင်မပဲ စိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်။
အဲဒီစကားတွေက ကြားဖူးနေတာကြာပြီ ကို kai ကြီးပြောမှပဲ စဉ်းစားမိတော့တယ် တော်တော်ဆိုးတာပဲ ဒါပေမယ့် ခုတော့ သိပ်မဆန်းသလို ခဏခဏ ကြားရပါ့
နေရာတိုင်းသုံးလို့ ကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သူလေးရေ…ပေးဆပ်ဖို့(ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ ၀ဋ်င်္ကြွေး သီချင်းပါ) အကြောင်းမသိပဲ အမြန်ဆိုကြည့်လိုက်ပါ့လား ။ မြန်မာစကားက အသံ နဲ့ပါ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု ကွဲလွဲတာတွေရှိနေတော့ ….. ပြီတော့ အဲဒိလို အသံနဲ့ လိုက်ပြီး ညစ်ညမ်းတဲ့စကားကိုလှယ်သုံးတာတွေလည်း တွင်ကျယ်ခဲ့လေတော့ နောက်ပိုင်းသုံးတာတွေ မရိုင်းဘူး ထင်နေကြတာပါ ။ စောက်ဆိုတာကို သောက် ဆိုတာနဲ့လဲ လှယ်သုံးသလိုမျိုး နောက်ရှိသေးတယ်။ ဖျာသယ်မ တို့ ခြောက်ကျပ်ခွဲတို့ တာရိုးကနွားတို့
ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းသုံးနေနေ ဆဲတာကဆဲတာပါပဲ
အဆဲဋီကာမျိုးကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ထင်တယ်..။ ဘာသာပြန်ဖေါ်ပြဖူးတယ်..။ အင်္ဂလိပ်တွေ ..ထင်သလောက်အဆဲမစုံပါဘူး..။
မောင်ဖိုးထူးအတွှေအကြုံများစာအုပ်ထင်တယ်.. အဲဒီမှာလည်း မြန်မာ-တရုတ်မ၂ယောက်ရန်ဖြစ်တာ.. အစပိုင်းတရုတ်လိုဆဲနေတာကနေ ..မြန်မာလိုပြောင်းဆဲကြတော့ .. မောင်ဖိုးထူးကရန်ဖြစ်ပြီးတော့ သွားမေးတယ်.. ။ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့..။
ပြန်ဖြေတာက ..မြန်မာလိုဆဲတာတွေက .. စေးစေးပိုင်ပိုင်ရှိသတဲ့လေ..။
မြန်မာတွေက ..အဆဲအသန်ဆုံးလူမျိုူးတွေထဲပါတယ်..။ အဖေ၊အမေတွေနဲ့လည်း ပေးစားတိုင်းတာဆဲတယ်..။ လျှို့ ဝှက်အပ်တဲ့ လိင်ကိစ္စတွေနဲ့.. ဖေါ်ဆဲတတ်တယ်.
ဒီစကားလုံးတွေနဲ့… လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ..နူးညံ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တာနဲ့တော့ ..ဆိုင်မယ်မထင်..။
ကျွန်တော်အမြင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံး(မိုက်ရိုင်းတယ်လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးကိုပါ)
မုရင်းအနက်က မကောင်းရင် သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အနက်ကလဲ ကောင်မယ်မထင်ပါ၊
သူကြီးပြောတဲ့”စောက် “ဆိုတာ ဘယ်လောက်နက်သလဲလို့ တိုင်းတဲ့ “ဇောက်”ပါ။
စာလုံးတစ်လုံးမူလ အနက်ဘယ်လောက်ပဲလှလှ သူနဲ့တွဲသုံးတဲ့စကားလုံးက မကောင်းရင် မူလအနက်ပျက်ပါတယ်။
ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ဝေါဟာရ ကို ဘာသာပြန်ရတာခက်ပါတယ်။
အဲတော့ သုံးသင့်တယ် မသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကတော့ ချင့်ချိန်ရမှာဘဲ။
ဒါပေမယ် intro အခုပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ ကျနော်တို့ တစ်သက်လုံးမကောင်းတဲ့ သဘောဆောင်ပြီး သုံးလာတာမို့ ဘာနဲ့တွဲသုံးသုံး
စိတ်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ မခံစားရတာတော့ အမှန်ပါညီလေးရေ။
ဒါပေမယ့် ဒီစာလုံးလေးကို (ပက်ပက်စက်စက်လေးစားတယ်)
အသုံးအနှုန်းဆိုတာ အဆင့်အတန်းပေါ်မှာလည်း မူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆက်ဆံနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး အသုံးအနှုန်းကလည်း ပြောင်းလဲပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ကားသမားအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားတွေကို ကြားရတာ မျက်နှာပူပါတယ်။ ငါ့… ဆိုတာကို စကားတစ်ခွန်းဆုံးတိုင်းမှာ ဘာလို့ ထည့်သုံးတာလဲမသိဘူး။ သူတို့မို့လို့ ထွက်ရဲတယ်။
မွန် အဆောင်နေတုန်းက ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင် အဲဒီကောင်က၊ အဲဒီကောင်မကလို့ ပြောမိပါတယ်။ မသိဘဲ လွှတ်ခနဲထွက်ထွက်သွားတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အဆောင်ပိုင်ရှင် ကြီးကြီးက အဲဒီမင်းသား၊ အဲဒီမင်းသမီးလို့ပြောရမယ်လို့ ဆုံးမပါတယ်။ အဲဒီအခါမှပဲ သတိထားမိတယ်။
အခုသုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗန်းစကားတွေကို ဘယ်လိုမှ နားထောင်လို့ မရတာတော့ အမှန်ပါ။ မပြောမိအောင်လည်း သတိထားတယ်။
နောက်ပြီးလေ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သီချင်းထဲမှာ အရမ်းရွှိုင်တယ် ဆိုတာပါတယ်။ ဘာအဓိပါယ်လဲတော့ မသိဘူး။